news – Page5– Department of Medical Service
Posted on January 15, 2020 by nay win aung
(၄၈)ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သုတေသနညီလာခံကို ရန်ကုန်မြို့၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနတွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၃)ရက်မှ (၁၇)ရက်အထိ ကျင်းပ ပြုလုပ်လျက်ရှိရာ ညီလာခံ၏ ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုအဖြစ် Symposium on Patient Safety ကို ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊ Auditorium2၌ ဇန်နဝါရီလ (၁၄)ရက်နေ့၊ နံနက် (၉:၃၀)နာရီမှ မွန်းလွဲ (၁၂:၃၀)နာရီအထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဇော်သန်းထွန်းနှင့် ဆေးတက္ကသိုလ်(၁)ရန်ကုန်မှ ပါမောက္ခ/ဌာနမှူး(ဆေးပညာ) ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်လင်းအောင်တို့က သဘာပတိများအဖြစ်... Read More | Share it now!
Posted on January 13, 2020 by nay win aung
ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ကုသမှုအထောက်အကူပြုဌာနခွဲ၊ ဆေးလူမှုဆက်ဆံရေးဌာနစိတ်နှင့် Unicef (Myanmar)တို့ ပူးပေါင်း၍ ဆေးလူမှုဆက်ဆံရေးဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် ပိုမိုမြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် အကြံပေးအတိုင်ပင်ခံ(၂)ဦးအား ခေါ်ယူ၍ SOP Guidelines ရေးဆွဲ နိုင်ရန်နှင့် လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်များသို့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အကြံပေး အတိုင်ပင်ခံ (၂)ဦးတို့ဖြင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း အခမ်းအနားအား(၇-၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့ နံနက် (၀၉:၀၀) နာရီတွင် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ကုသရေး)၊ ရုံးခန်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားတွင် ဒေါက်တာသီတာလှ၊... Read More | Share it now!
ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ဘဏ္ဍာရေးဌာနမှဝန်ထမ်းများနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ ပူးပေါင်း၍ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ နည်းပညာအကူအညီဖြင့် Electronic Monthly Implementation Reporting System သင်တန်းအား စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ငွေစာရင်းကိုင်ဝန်ထမ်းများအား (15.12.2019) မှ (20.12.2019) ထိ (6)ရက် တိုင်အောင် Refresher Training ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ... Read More | Share it now!
Posted on January 8, 2020 by nay win aung
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ကုသရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ နေပြည်တော် သွားနှင့်ခံတွင်းအထူးကုဆေးရုံကြီးတွင် သွားနှင့်ခံတွင်း ရောဂါဝေဒနာခံစားနေရသော ပြည်သူများအား သွားနှင့်ခံတွင်းကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ရေး လုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်သော သွားနှင့်ခံတွင်းကျန်းမာရေး အသိပညာပေးဟောပြောခြင်း၊ စနစ်မှန် သွားတိုက်နည်းသင်ကြားပြသခြင်းနှင့် အတူတကွသွားတိုက်ခြင်း၊ သွားနှင့်ခံတွင်းရောဂါများအား လိုအပ်သည့်စစ်ဆေးကုသခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ... Read More | Share it now!